Talaalka – somali
Talaaka qaaxada ee BCG caruurta caano nuuga ah iyo caruurta kale ee yaryar waxa uu ka defaacaa noocyada halista ee xanuunka qaaxada.
Talaal BCG oo loo soo gaabiyay (Bacillus Calmette Guerin) talaalku wxa uu ka difaacaa caruurta caano nuuga ah iyo kuwa sii waawayn noocyada cudura qaaxada ee halista ah sida qoorgoga qaaxada iyo qaaxada dhiig raacda.
Waqtiyadii hore caruura too dhan waxa laga talaali jiray dalka Finland xanuunka qaaxada. Laga bilaabo sanadka 2006 taalka BCG waxa lasiiyaa caruurta looga baqaayo in ay si gaara ugu halisyihiin cudurka qaaxada. Bedelaad la bedelay habkii talaalka waa tirada xaaladaha qaaxada oo hoos u dhacday dalka Finland.
Talaaka waxa la siyaa inta badan caruurta muujada ama dhawaan dhalatay. Cruurta da’doodu todoba sano ka wayntahay lama talaalo. Bahida talaaka waxa go’aamiya dhakhtarka. Talaaa waxa lagu siiyaa caruurta lacag la’aan. Talaaka BCG waxa lagula talinayaa caruurta
kuwa la nool xubno qos ama dad kale oo qabay cudurka qaaxada
u dhasy dal ay cudura qaaxadu ku badantay ama la nool xubno qoys ama qof ku dhashay wadan ay qaaxadu ku badantay ama
ama u guuraya dal ay qaaxadu ku badantay halkaasna joogaaya mudo ka badan hal bil
Talaalka BCG waxa kale oo lagula talinayaa hadii ilmuhu xidhiidh joogta ah uu la leeyahya qof
kaas oo ka yimid wadan ay qaaxadu u badantay
kaas oo qaba xanuuna qaaxada
kaas oo loo aqoonsanday in haslis u yahay cudura qaaxada
Talaaka BCG oo la qaato waqtiga caruurnimadu ma daafacyso qofa waqiga uu yahay waayeelka ama qof wayn.
Akhri maclumaad dheerada oo kuqoran (afka fiinishka oo kelya) oo ku saabsan talaalka BCG kana akhri Hayada Wadaniga ah ee Caafimaadka iyo Samafalka.
Talaalol ka cusub kana khatar yar ayaa dunida laga soo saarayaa.